उचाइ बढाउन चाहनुहुन्छ ? यी खानेकुरा खानुहास् ।
दूधसँगै दही, घिउ, पनिरलगायत दूधजन्य खानेकुरामा प्रशस्त मात्रामा खनिज पदार्थ पाइन्छन् । त्यस्तै, यी चिजबाट भिटामिन ए, बी, डी र ई, क्याल्सियम तथा प्रोटिन आदि आवश्यक पदार्थ पनि प्राप्त हुन्छन् । जसले हाम्रो शरीरमा कोषिकाको विकास गर्छन् । त्यसैले, हरेक दिन दूधजन्य खानेकुरा सेवन गरेमा बच्चाको मांशपेसी छिटो विकास हुन सघाउ पुग्छ ।
उचाइ वृद्धिका लागि अन्डा अत्यावश्यक आहार हो । यसमा उच्च मात्रामा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन बी र रिबोफ्लिाभिन पाइने भएकाले वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ । अन्डाभित्रको पहेँलो भाग प्रोटिनयुक्त हुने भएकाले मोटोपन भएकाहरूले सेतो भाग मात्रै खाँदा बेस हुन्छ ।
माछा भिटामिन, क्याल्सियम र प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । त्यस्तै, कुखुराको मासुमा उच्च मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । साथै, रातो मासु पनि पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ । तर, रातो मासु धेरै खानु भने हुँदैन । माछा/मासुको सेवनले मांशपेसीसँगै हड्डीसमेत बलियो बनाउँछ । यससँगै उचाइ स्वतः बढ्छ ।
मुला र गाँजर खान रुचाउने बच्चामा उचाइ कम हुने समस्या निकै कम हुन्छ । नियमित गाँजर सेवन गर्दा हड्डी बलियो हुन्छ, जसले वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ । त्यस्तै, मुला र गान्टेमुलाको सेवनले शरीरमा हर्मोन वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।
व्यक्तिको पूर्ण शारीरिक विकासका लागि अन्न आवश्यक खाद्यवस्तु हो । त्यस्तै, बच्चाको वृद्धि विकासमा पनि अन्नले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले, मकै, गहुँ, चामल र कोदोजस्ता अन्न बच्चाको खानामा नियमित समावेश गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा चाहिने आवश्यक सबै पौष्टिक तत्व पारिपूर्ति गर्छ ।
शारीरिक वृद्धि विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण खानेकुरा गेडागुडी हो । गेडागुडीमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर र क्याल्सियम पाइने भएकाले यी हाडजोर्नीको विकासमा सहयोगी हुन्छन्
डा. नवीन अर्यालले बुधबारको नयाँ पत्रिकामा खबर लेख्नु भएको छ ।